Amisom oo Markii ugu horeysay Howlgalo Baaritaan ka Fulineysa Caasimada Somalia – SBC
Amisom oo Markii ugu horeysay Howlgalo Baaritaan ka Fulineysa Caasimada Somalia
Afhayeenka ciidamada Nabad ilaalinta u jooga Dalka Soomaaliya ee Amisom Cali Aadan Xumud Ayaa Hadal cad ka soo saaray Amaanka magaalada Muqdisho iyo Howlgalada ka socda magaaladaas.
Cali Aadan Xumad oo Saxaafada kula hadlay gudaha Muqdisho ayaa sheegay in Howlgaladan ay yihiin kuwo ciidanku ay ku muujinayaan wax ka qabadkooda amaanka ayna markii ugu horeysay ka qeyb qaadanayaan ciidamo ka tirsan Amisom.
“Ciidanku Maalin iyo habeen labaduba waxay shaqeynayaan, meelkasta oo lagu tuuhmahana gur guri ayay u gali doonaan iyadoo lagu sameynayo baaritaan dhinackasto ah” sidaasi waxaa yiri Cali Aadan Xumad.
Waxay Holwgaladani ka dambeeyeen ka dib markii weeraro laga soo qaado xaafadaha qaar ee muqdisho lagu waxyeeleeyay ciidamada dowlada federaalka ah iyadoo tii ugu dambeysay aheyd weerar Madaafiic aan gabasho laheyn oo lagu qaaday Madaxtooyada Villa Somalia.
“Ciidamadu Waxay Bilaabeen Howlqaran oo lagu baarayo Magaalada Muqdisho gunteeda iyo hareeraheeda, Howshan aan idiin sheegayo ma ahan mid iminka bilaabtay todobaadyadanba waa laguguda jiray” waxaa sidaasi markale yiri Afhayeenka Amisom.
Waxaa kale oo uu Cali Aadan Xumad ka warbixiyay dad lagu soo qabqabtay Howlgalo ilaa iyo xalay ka soconayay Muqdisho kuwaas oo uu sheegay in ay ku socoto Baaritaan hadii dembi lagu helo la abaal marin doono hadiikalese la siideyn doono.